ဝါးခယ်မ : ရုပ်ရှင်ရုံလေး တစ်ရုံ တော. ရှိစေချင်
ရုပ်ရှင်ရုံလေး တစ်ရုံ တော. ရှိစေချင်
ပြင်သစ်နိုင်ငံ မှ ကမ္ဘာ.အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ရုံ တစ်ခု
ဟိုးးးးး ယခင်က မြို.လေးတွင် ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုရှိခဲ့ဖူးပြီး ယခုတိုင်ထိုလမ်းလေးကို ရုံဟောင်းလမ်းဟု ခေါ်ဆိုမှုများ ရှိနေသေးကြောင်း သိရပါသည် ။
ထို.နောက် အသံတိတ်ရုပ်ရှင်ခောတ်တွင် ပတ္တမြား ရုံ ဟု ရုပ်ရှင်ရုံ တစ်ရုံ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ( အတိအကျ မသိရသော်လည်း ) ၁၉၅၀ ခန်.တွင် ရှိနေပြီဟုယူဆရပါသည် ။ ထိုစဉ်က ပြားသုံးဆယ် တန်း နှင့် ပြားခြောက်ဆယ်တန်း ဟုရှိပြီး ကြူဖျာခင်း၍ ကြည့်ကြရခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည် ။ ထိုစဉ်က အသံတိတ်ခောတ်မို. ရုပ်ရှင်ပြလျှင် အောက်က ဆိုင်းဝိုင်းက တီးပေးရခြင်းဖြစ်ပြီး ပထမဦးဆုံးပွဲဆိုလျှင် ဆိုင်းတီးသူများကလည်း မကြည့်ရသေးသဖြင့် အလွဲအမှားများဖြင့် ရယ်မောကြရသည်ဟုဆိုသည် ။ နောက်ပိုင်းပွဲများတွင်မူ လွမ်းခမ်းကျ နှဲ ၊ ဖိုက်ခန်းကျ ဗိမ်းဗောင်း စသည်ဖြင့် ကွက်တိကျအောင်တီးနိုင်ကြသည်ဟုဆိုသည် ။ ထိုတီးဝိုင်းအမည်ကို မသိရသေးသော်လည်း ဦးငြိမ်းမောင်ထိုတီးဝိုင်းဟု အလွယ်တကူ ဆိုကြပါသည် ။ .နောက်ပိုင်းတွင်တော. ခုံတန်းရှည်များဖြင့် ရှေ.က ငါးမူးတန်း ၊ နောက်က တစ်ကျပ်တန်း ဖြစ်လာသည်ဟုဆိုပါသည် ။ ထိုစဉ်က ရုံပိုင်ရှင်မှာ မောလမြိုင်ကျွန်းမြို.တွင်လည်း ပတ္တမြား အမည်ဖြင့်ပင် ရုပ်ရှင်ရုံ တစ်ရုံ တည်ထောင်ထားသေးသည်ဟုဆိုပါသည် ။
ထို.နောက်တွင်တော. ရုံသစ်ဟုခေါ်ကြသော ရွှေပြည်အေးရုံတစ်ရုံထပ်ပေါ်လာပြီး သူကတော. နှစ်ထပ် ရုံဖြစ်ပါသည် ။ အပေါ်ထပ်ကိုတော. အထူးတန်းဟုခေါ်ကြသည် ။
ထိုစဉ်က မနက်ပိုင်းများတွင် ရုပ်ရှင်ကားကြော်ငြာလှည်းများမှ ကြော်ငြာသည်ကိုနားထောင် ၊ လိုက်ကမ်းသော လက်ကမ်းကြော်ငြာများတောင်းကြ ၊ ညပိုင်းများတွင် ရုပ်ရှင်ရုံရှေ.ဈေးတန်းများတွင် မုန်.သွားစား ၊ နောက်လဲမည့် ကားကြော်ငြာများ ပြထားသည်ကို ရုပ်ရှင်ရုံ ရှေ.အတွင်းဘက်တွင် လိုက်မော.ကြည့် သည့် ဓလေ့များရှိခဲ့ကြသည် ။ ညနေစောင်းတွင် ထိုရုပ်ရှင်ရုံများမှ ဖွင်.သော အသံချဲ့စက်သံများကလည်း မြို.လေး၏ အလယ်ပိုင်းတစ်ဝိုက်တွင် ကြားရလေ့ရှိကြသည် ။ လပြည့်ရက်များ ၊ အခါကြီး ရက်ကြီးများ တွင် ကားကောင်းများ ၊ နာမည်ကြီးကားများ တင်လေ့ရှိပြီး အနီးအနားကျေးရွာများမှ တကူးတက လာရောက်ကြည့်ရှုသူများဖြင့် ထိုရက်များတွင် ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ဝိုက် အထူးစည်ကားလေ့ရှိသည် ။ ကျေးလက်မှ ရုပ်ရှင်လာကြည့်သူများတွင် မိန်းကလေးငယ်များပါလာတတ်သလို ထိုမိန်းကလေးငယ်များကို ငေးမောရင်း ၊ ချဉ်းကပ်ဖို.ကြိုးစားရင်း မြို.မှ လူငယ်များလည်း ထိုနေရာတွင် စည်ကားနေတတ်ကြသည်ဟုဆိုပါသည် ။ သို.သော် ချီးကျုးဖို.ကောင်းသည်က ထိုခောတ်က မိန်းကလေးကိစ္စကြောင့် ရန်ဖြစ်ကြခြင်းများ ၊ ရုပ်ရှင်လာကြည့်ရင်း မူးရူးနေကြသူများ စသည်တို.မရှိသလောက် ရှားပါးခြင်းဖြစ်သည် ။
ထိုကာလ ညဦးပိုင်းများသည် ဘုရားကြီး ၊ ဘုရားကြီးလမ်းမှ ကိုအေး အအေးဆိုင် ၊ ထိုမှ ပတ္တမြားရုံ ဈေးတန်း ၊ ထိုမှ ရွှေပြည်အေးရုံဈေးတန်း ၊ ရုပ်ရှင်ရုံရှေ. လဘက်ရည်ဆိုင်များ ၊ ထိုရုပ်ရှင် ရုံ ၂ခုအကြားကမ်းနားဘက်ရှိ ဧရာဝတီ သင်္ဘောဆိပ် စသည်တို.ဖြင့် မိသားစုလိုက် ၊ သူငယ်ချင်းအဖွဲ.လိုက် လမ်းလျှောက်ထွက်ရာ ၊ ငေးမောကြည့်ရှုရာ ၊ မုန်.ထွက်စားစရာ နေရာများဖြစ်ခဲ့ကြသည် ။
ထို.နောက်ပိုင်းများတွင်တော. ရုပ်ရှင်လောကတွင် ဖလင်ရှားပါးရာ မှ တစ်နှစ်မှ ၁၀ ကားခန်.သာ ထွက် ၊ ပြစရာ ကားရှား ၊ နိုင်ငံခြားကားများအားကိုးပြကြသော်လည်း ပြစက်များက ခောတ်မမှီ ၊ ရုံများ၏ အသံစနစ် ၊ သန်.ရှင်းမှု စသည်တို. တစ်ဖြေးဖြေး ယိုယွင်းလာပြီး ခောတ်ပျက်မတတ် ဖြစ်လာခဲ့သည် ။ သို.သော် DVD များ ၊ ဘောလုံးပွဲများဖြင့် အသံစနစ်များလဲ ၊ ပြစက်စနစ်များပြောင်းခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံး ၂ရုံလုံး ဇီဝိန် ချုပ်ခဲ့ကြရသည် ။
Entertainment Pyridine , Business Pyridine တို.အရွေ.၀ယ် ရုပ်ရှင်ရုံ အတော်များများ ဇီဝိန်ချုပ်သွားကြသည့်အနက် ပတ္တမြား နှင့် ရွှေပြည်အေးဆိုသော စာလုံးနှစ်လုံးလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်သည် ။
ယခင်က ပွဲကြည့်ချင်လျှင်တောင်မှ မြို.တက်ကြည့်ကြရသောကျေးရွာများ ၊ ဘုန်းကြီးပျံ ရှိမှ ဆိုင်းကောင်းကောင်းနားထောင်ရသောကျေးရွာများတွင် ယခု ကိုယ်တိုင်နာမည်ကျော်ဇာတ်သွင်းပြီးကြည့်နိုင်ကြသလို တကမ္ဘာလုံးက ဖျော်ဖြေမှုများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ အိမ်တွင်ထိုင်ရာမထ ကြည့်နိုင်ကြသောခောတ်ဝယ် အချို.မြို.ငယ်များရှိ ကြံ့ကြံ့ ခံ ရပ်တည်နေရသော ရုပ်ရှင်ရုံများပင်လျှင် ဖုတ်လှိုက် ဖုတ်လှိုက် အဆင့်တွင် ရှိနေခြင်းက မနှစ်လိုစရာ ရာ ပကတိအမှန်တရားတစ်ခုပင် ။
သို.သော် မြို.ပြများရှိ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်မူ အများပြည်သူအားလပ်ရက် တစ်ပွဲမှ လက်မှတ်ဝယ်မရသော အခြေအနေများကလည်း အမှန်တကယ်ပဲဖြစ်ပျက်နေခဲ့ပြန်သည် ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း ။
အိမ်တွင်း ဖျော်ဖြေမှု စနစ်များ မည်မျှ တိုးတက်လာသည်ဖြစ်ပါစေ
ကိုယ်.ဖုန်းမှနေ၍ ကြည့်ချင်သမျှ မည်မျှကြည့်၍ရနေသည်ဖြစ်ပါစေ ……………..
အိမ်တွင်း အဆင့်မှီ Home Theater System တစ်ခုဆင်ဖို.အတွက် သာမာန်မိသားစုတစ်ခုအတွက် အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမှီ နိုင်သော တန်ဘိုးပမာဏ အထက်တွင်ရှိနေခြင်း
နိုင်ငံတွင်း ဥပဒေများအရ ရုံတင်ကားကြီးများသည် သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုမပြည့်မချင်း DVD / VCD အဖြစ် ထုတ်ခွင့်မရသေးခြင်း
ရုပ်ရှင်ရုံများ၏ ဖျော်ဖြေမှု ရသ ပေးနိုင်စွမ်းမြင့်မားလာခြင်း ( ပိတ်ကား ဟုခေါ်ခေါ် Screen ဟုသုံးသုံး ပိုမိုကျယ်ပြန်.စွာ / ပိုမိုကြည်လင်တောက်ပစွာ ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်ခြင်း ၊ အသံစနစ်တွင်လည်း Hi Definition System ထိုမှ 5.1 Dolby System မှသည် လက်ရှိ 9.1 Dolby System အထိ တို.တက်လာသော အသံစနစ်များ )
ထို.အပြင် နှစ်ယောက်တွဲ ၊ သူငယ်ချင်းအဖွဲ.လိုက် ၊ မိသားစုလိုက် စသည်ဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ရသပြည့် ခံစားကြည်.ရှု နိုင်သလို ထိုအပြုအမူသည် အချင်းချင်းကြား ယခုတိုင်ပိုမိုနွေးထွေးသွားစေသော လုပ်ဆောင်မှု အဖြစ် ရှိနေသေးခြင်း တို.က ရုပ်ရှင်ရုံများ ပျောက်ပျက်မသွားရသေးခြင်းအတွက် အချို.သော အချက်အလက်များဖြစ်ပါလိမ့်မည် ။
ယခုနောက်ပိုင်းကာလတွင် ဖလင်မလိုသော စနစ် ၊ DVD ရိုက်ခွင့်မပြုတော့သော ထိန်းချုပ်မှု ၊ Video / VCD ကားများ ဈေးကွက်ပျက်ယွင်းလာခြင်းတို. အနက် ကောင်းသောအကျိုးဆက်တစ်ခုက မြန်မာရုပ်ရှင် ကား တစ်နှစ်ကို ၅၀ မှ ၁၀၀ ကြား ထွက်သော ကာလသို.ရောက်လာသလို ပြည်ပ ဇာတ်ကားများလည်း ( အချို.ဆိုလျှင် ) အမေရိကားနှင့်အပြိုင် ရုံတင်နေကြပြီ ဖြစ်သလို ရုပ်ရှင်ရုံ အသစ်များ လည်း ( ယခင်လိုရုံကြီးများ မဟုတ်သော်လည်း ) အများအပြားပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် ။
မင်္ဂလာ ရုပ်ရှင်ရုံများအုပ်စု ၊ Mega Ace အုပ်စု ၊ JCGV အုပ်စု ၊ Paradiso Cinema အုပ်စု စသည်ဖြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲ ၀င်ရောက်လာသော အဖွဲ.များ သိသိသာသာ များပြားလာပြီး မင်္ဂလာ ရုပ်ရှင်ရုံများအုပ်စု အောက်တွင် ရန်ကုန်မြို.၏ အစဉ်အလာအရ နာမည်ကြီးသော ရုံအများစုရှိနေသလို Mega Ace အုပ်စုအောက်တွင်လည်း မြို.ပတ်ရုံအချို.ရှိနေသကဲ့သို. လတ်တလော ဦးတည်ချက်အနေဖြင့် ရုံ ၂၀ ဖွင့်လှစ်ရန် ကြိုးစားနေကြောင်းသိရသည် ။
ထိုအထဲတွင် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည်က ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် လွင်မိုး တို.၏ Paradiso Cinema အုပ်စုဖြစ်ပြီးသူတို.ရည်မှန်းချက်က ရုပ်ရှင်ရုံ ၁၀၀ စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး နယ်မြို.များတွင် အဓိက တည်ဆောက် ဖွင့်လှစ်နေခြင်းဖြစ်သည် ။ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်ကပင်လျှင် မတ္တရာမြို.တွင် ရုပ်ရှင်ရုံ အသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သူတို.အနေဖြင့် ၁၇ ရုံ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ။
Iunction Square ရှိ ရုပ်ရှင်ရုံ တန်း
တစ်ချိန်က ဇာတိဖွားတို.အနေဖြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ မရှိသော မြို.လေးများရောက်လျှင် လှောင်စရာအဖြစ်ပြောဆိုခဲ့ကြဖူးသည် ။ ယခုကတော. မိမိတို.မြို.လေးတွင် ရုပ်ရှင်ရုံ မရှိခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ် ဘယ်နှစ်ခုရှိပြီလဲတောင် မသိတော. ။ တစ်ချိန်က Township Level တူမြို.များအချင်းချင်း ဘာ မင်းတို.မြို.မှာ ရုပ်ရှင်ရုံ မရှိဘူး …ဟုတ်လား … ငါတို.ဆီမှာက ၂ရုံတောင်ရှိပါ့ ဟုပြောခဲ့ကြသော မိမိတို. အခုတော. အိမ်မှာ ဘာကြည့်ချင်ကြည့်ချင် ကြည့်လို.ရတာပဲဟု ပြောင်း၍ ဂုဏ်ယူလာတတ်ကြသည် ။
သို.ဆိုလျှင် မြို.လေးတွင်ကော ရုပ်ရှင် ရုံ တစ်ရုံလောက် မလိုဘူးလား ?
အသိသာဆုံးတစ်ခုက ပရိသတ်သည် ရုပ်ရှင် ကြည့်ရုံသက်သက်မဟုတ်တော.
အပန်းဖြေစရာ တစ်ခုတစ်ခုအဖြစ်ပါ ခံစားလာကြခြင်းဖြစ်သည် ။
အရင်လို စိုထိုင်းထိုင်း ၊ အနံ.ကမကောင်း ၊ ကြမ်းပိုးကကိုက် ၊ အိုက်ကအိုက် ၊ အရုပ်ကမှုန် ၊ အသံကတုန် ၊ ပိတ်ကားက ညစ်ထပ်ထပ် ဆိုတာမျိုးမရတော.
ကတ္တိပါကော်ဇော်ခင်းထားသော လမ်းများပေါ်မှလျှောက်ရင်း ၊ သက်တောင့်သက်သာရှိသော ခုံပေါ်တွင်ထိုင်ကာ ၊ အေးမြနေသော ရုံအတွင်းဝယ် ၊ အဆင့်မြင့် အသံစနစ် ကိုခံစားလျှက် ၊ ကြည်လင်တောက်ပသော အရုပ်ကိုကြည့်ရှုရင်း ၂နာရီစာ လောကနိဗ္ဗာန်ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြသူများဖြစ်လာကြသည် ။
ထိုသို.ဖြစ်အောင်လည်း မြို.ပြ ရုပ်ရှင်ရုံများက ဖန်တီးပေးထားကြသည် ။
သိန်း ရာထောင်ချီတန်သော ပိတ်ကားများ ၊ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ပတ်လည် အသံထွက် စနစ်များ နိုင်ငံခြားကားများဆိုလျှင်လည်း အရုပ် အသံအရည်အသွေးအတွက် Server ထိုင်လျှက် Hard Disk ဖြင့်တိုက်ရိုက်ပြလာကြသည် ။
ထို.ကြောင့် တတ်နိုင်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ရှိလျှင်ဖြစ်စေ ၊ လုပ်နိုင်စွမ်းသူများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင်ဖြစ်စေ ၀ါးခယ်မမြို.လေးတွင် ယခုကဲ့သို.သော ခောတ်ကာလအတွင်း ရုပ်ရှင်ရုံလေး တစ်ရုံတော. ရှိစေချင်မိပါကြောင်း ။
E-Cinema နှင်. ဇီဝိန်ချုပ်နှင်.သော မြို.လေးက ဘိုင်စကုပ်ရုံများ
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 11:21 AM
Labels: မြို.လေးနှင်. ပတ်သက်ဖွဲ.သီ စာပန်းချီ, မြို.လေးနှင်. သူ၏ မိတ်ဆွေများ
အေးချမ်းရိပ်ငြိမ် ပညာကုသိုလ် ၏ ၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် အြေ...